Tiketi Ugbo ala Eurostar na ọnụ ahịa njem | Chekwa ụgbọ oloko
Tiketi Ugbo ala Eurostar na ọnụ ahịa njem
Ụlọ > Tiketi Ugbo ala Eurostar na ọnụ ahịa njem
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Tiketi ụgbọ oloko Eurostar dị ọnụ ala na Ọnụ ahịa njem Eurostar na uru.
isiokwu: 1. Eurostar site na Train Highlights
2. Banyere Eurostar 3. Nleta dị elu iji nweta tiketi ụgbọ ala Eurostar dị ọnụ ala
4. Ego ole ka tiketi Eurostar na-eri 5. Kedu ihe kpatara o ji ka mma iji ụgbọ oloko Eurostar, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Standard Premier na Business Premier na Eurostar 7. Enwere ndenye aha Eurostar
8. Ogologo oge tupu ọpụpụ ga-abata 9. Kedu oge usoro ụgbọ oloko Eurostar
10. Kedu ụlọ ọrụ Eurostar na-eje ozi 11. Eurostar FAQ
Eurostar site na Train Highlights
Emere ụlọ ọrụ Eurostar na 14th nke November 1994
Otu n'ime ụgbọ oloko kachasị na Europe bụ Eurostar, Ọsọ Eurostar na-erute bụ 320km elekere
Ọwa Eurostar bụ 50.45 km ogologo ma ọ bụ 31.5 kilomita. Nke ahụ bụ nha nke 169 Eiffel Towers tochiri ma ibe ya
2h15 nke oge njem n'etiti Paris na London na Eurostar
Mgbe gị na Eurostar si UK na Europe, ị nwetara 1 oge laghachiri na oge
Inggafe Ọwa Ọwa na-ewe 35 nkeji
Insgbọ oloko elu Eurostar bụ ọrụ na-ejikọ Western Europe Na London na Kent na United Kingdom, Njikọ si Europe bụ Paris na Lille na France, Brussels, na Antwerp na Belgium, Rotterdam na Amsterdam na Netherlands. Ọzọkwa, Inwere ike iji ụgbọ oloko si Lọndọn gaa na Disneyland Paris (Marne La Vallee Chessy Train Station) na kwa njem oge na France Dị ka Marseilles na Moutiers na French Alps. Eurogbọ oloko Eurostar niile na-agafe Ọwa English site na Ọwa Mmiri.
Nke Ọrụ ụgbọ oloko Eurostar ụgbọ oloko na-aga njem ruo 320 km otu awa n'okporo ụzọ ụgbọ elu. Ebe ọ bụ na Eurostar malitere ịrụ ọrụ 1994, Ewula uzo ohuru na Belgium na UK iji belata oge njem n'etiti njem Eurostar. Emechara uzo abuo Ọdụ Ọgba Ọdụdọ na 14th nke November 2007, mgbe ebugharị ọdụ London nke Eurostar site na Waterloo International gaa London St Pancras International ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ na-azụ tiketi maka Eurostar
– Chekwaa Azụ iPhone App
– Chekwaa Azụ gam akporo Ngwa
Bọchị nloghachi (Nhọrọ)
Nleta dị elu iji nweta tiketi ụgbọ ala Eurostar dị ọnụ ala
Nọmba 1: Detuo tiketi Eurostar tupu ị nwere ike
Tiketi ụgbọ ala Eurostar dị n'etiti 3 ọnwa ka 6 ọnwa tupu njem ụgbọ oloko aga. Ibido tiketi ụgbọ elu tupu oge gboo na-enweta tiketi kachasị ọnụ na tiketi ụgbọ ala Eurostar dị ọnụ ala. Ọnụ ahịa ụgbọ ala Eurostar na-agbago elu ọnụahịa ka ị na-abịaru nso ụbọchị njem, ya mere iji chekwaa ego na zụta tiketi ụgbọ oloko gị, ịtụ dị ka o kwere mee tupu oge ọ bụla.
Nọmba 2: Njem site na Eurostar n'oge oge dị elu
Eurostar, Ọnụ ahịa tiketi dị ọnụ ala karịa n'oge awa na-enweghị atụ, na mbido izu, ye ke uwemeyo. N'etiti izu izu njem ụgbọ oloko (Tuzdee, Wenezde na Tọzde) na-enyekarị ọnụahịa dị ọnụ ala. Maka ọnụahịa kachasị mma, ewerela Eurostar n'isi ụtụtụ na mbubreyo izu (n'ihi ọtụtụ ndị njem na-azụ ahịa), zere iburu njem Eurostar na mgbede Fraịde na Sọnde (mma maka ngwụsị izu), n'oge ezumike ọha na eze n’oge ezumike ụlọ akwụkwọ ọnụ ahịa Eurostar skyrocket.
Nọmba 3: Denye tiketi maka Eurostar mgbe ejiri n'aka na usoro njem gị
Ọrụ ụgbọ oloko Eurostar nọ n'ọkwa dị elu ma ugbu a, naanị ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Eurostar na-arụ ụgbọ oloko na ọwara mmiri Channel Channel, Ya mere, enweghị asọmpi. Eurostar ịbụ naanị onye na-anya ụgbọ oloko n'okporo ụzọ dị n'etiti England na Western Europe etinyela ụfọdụ mmachi tiketi. Naanị Business Premier ụdị nke ụgbọ oloko a nwere ike gbanwere, enweghị ike ịgbanwere ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ụgbọ oloko nke ọzọ, mana enwere nzukọ na ịntanetị ị nwere ike ree tiketi ụgbọ elu gị nke abụọ. Ya mere, Dokwaa nkwanye ụgbọ oloko maka Njem Eurostar bụ akwụkwọ mgbe ị ji n'aka na usoro njem gị.
Nọmba 4: Zụta tiketi Eurostar gị na Save A Train
Chekwaa Tragbọ Agbọala nwere onyinye kasịnụ nke tiketi ụgbọ elu na Europe na ụwa niile, na n'ihi ike anyị, anyị na-ahụ tiketi tiketi Eurostar dị ọnụ ala. Anyị jikọtara na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na isi mmalite na usoro teknụzụ anyị na-enye gị tiketi Eurostar kachasị ọnụ ma mgbe ụfọdụ yana ijikọ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè gaa ebe ndị ọzọ.. Anyị nwekwara ike ịchọta ụzọ ọzọ na Eurostar.
Amsterdam To London train tiketi
Paris na London traktị tiketi
Berlin na London trainssss tik
Brussels na London ụgbọ elu tiketi
Ego ole ka tiketi Eurostar na-eri?
Ọnụ ahịa tiketi nwere ike ịmalite na € 35 na oge nkwalite mana ọ nwere ike iru € 310 na nkeji ikpeazụ. Ọnụ ahịa Eurostar dabere na klaasị ị họọrọ. Nke a bụ okpokoro nchịkọta nke ọnụego nkezi nke klaasị maka London-Paris / London-Brussels / Njem London-Amsterdam:
Tiketi otu-uzo Njem okirikiri
Ọkọlọtọ 35 € – 190 € 68 € – 380 €
London na Brussels site na ụgbọ okporo ígwè
London na Paris ụgbọ okporo ígwè
Lil na-aga London site na ụgbọ oloko
London na Amsterdam site na ụgbọ oloko
Kedu ihe kpatara o ji ka mma iji ụgbọ oloko Eurostar, gharakwa njem ụgbọ elu?
1) Uru nke njem Eurostar bụ na ị ga -arute kpọmkwem n'obodo etiti obodo ọ bụla ị na-esi, nke a bụ ihe pụrụ iche na ụgbọ oloko, yabụ ọ bụrụ na ị zụọ njem site na Paris, Brussels, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Lille ma ọ bụ London nke a bụ nnukwu uru maka Eurostar. Mgbe ọ na-abịa Ingnye ọnụahịa Eurostar, ọ na-agbanwekarị. Promofọdụ nkwalite na-enye gị ohere ịnweta tiketi ụgbọ ala Eurostar dị ọnụ ala. Ma n’oge ikpeazụ tupu ọpụpụ, ọnụ ahịa ndị ahụ na-elu elu. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị maka njem dị larịị, Eurostar bụ nke gị!
2) Ga njem ụgbọelu nwere usoro nchekwa ọdụ ụgbọ elu, na nke ahụ pụtara na ị ga-enwerịrị opekata mpe 2 elekere tupu njem ịghachị, na Eurostar ịkwesịrị ịdị na-ekpe ikpe ziri ezi 1 elekere tupu oge eruo. Ọzọkwa, have ga-eji ụgbọ elu gafere site na etiti obodo. Yabụ ọ bụrụ na ị gụọ oge njem niile, Eurostar na-emeri oge niile na njem niile.
3) Mgbe ụfọdụ ọnụ ahịa ụgbọ elu dị elu karịa site na ụgbọ elu na ọnụ ahịa ihu tiketi, mana ntụnyere kwesịrị ịgụnye, Ego ole ka ọ na-efu gị iji ụzọ ụgbọ njem ọ bụla n'ọdụ ụgbọ elu, wezuga oge ụfọdụ ị ga-enwetakwa oge mapụtara na-aga njem site na Eurostar, na nke ikpeazụ ị jiri Eurostar ị nweghị ụgwọ akpa.
4) Plangbọ elu bụ otu n'ime ihe kpatara mmetọ dị elu nke ụwa anyị, na eji atụnyere, ụgbọ oloko bu ọtụtụ ndị ọzọ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ma ọ bụrụ na i jiri ụgbọ elu atụnyere ịgagharị njem, Njem ụgbọ oloko dị obere ikuku ikuku 20x karịa ikuku ụgbọ elu.
Luxembourg Ka tiketi London
Antwerp na tiketi London
Rotterdam na-aga tiketi na London
Lyon gaa tiketi dị na London
Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Standard Premier, na Business Premier na Eurostar?
Euro ụgbọ ala Eurostar nwere ọtụtụ ọrụ klaasị maka emefu ego ọ bụla, na ụdị onye njem ọ bụla, whether you are a business traveler or leisure or both 🙂
Tiketi Eurostar Standard:
Nke Tiketi Eurostar bụ ọnụ ala karịa ego ụgbọ ndị a na-enweta. Ọ kachasị mma itinye tiketi ụgbọ oloko a tupu oge eruo, n'ihi Standard tiketi ọnụahịa dị ala – ha na-ere ngwa ngwa. Ndị njem na-ejide tiketi dị larịị nwere ike iwere 2 akpati ozu + 1 buru ngwongwo n’efu. Ndị njem nọ na Tiketi Eurostar nwekwara ike ịnụ ụtọ WiFi na nhọrọ oche efu. Tiketi ọkọlọtọ na-abụkarị anaghị akwụghachi ụgwọ.
Tiketi Ego Eurostar Premier:
Igwe tiketi a dị oke ọnụ karịa ụdị tiketi tiketi Euro Euro, na Akwụkwọ ọkwa Premier na-enye ndị ọzọ ọrụ. Na mgbakwunye na uru nke ọkọlọtọ Standard anyị dere n’elu, Tiketi Premier Standard na-enye oche ndị mara mma karịa nke nwere legroom, a na-akwụkarị ụgwọ akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ na-akwụghị ụgwọ, ị ga-erikwa nri dị ọkụ na ihe ọ toụ drinksụ n’elu oche gị n’ụgbọ Eurostar. A na-agbanwegharị tiketi Premier Standard na ụgwọ dabere na ebe ị na-aga.
Tiketi Premier Eurostar nke azụmahịa:
Nke Eurostar Business Premier tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile anyị dere n’elu mana ha nwekwara, Ndị njem Eurostar Business Premier ga-erite uru na 3 ibu akpa kama 2, menu nri na-ekpo ọkụ okomoko nke ndị osi nri a ma ama Raymond Blanc a ma ama, Ndị njem nke Business Premier nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ezumike tupu ha abanye ụgbọ oloko na-aga London ma ọ bụ site na Lọndọn, na mgbakwunye a na ndenye pụrụ iche na naanị 10 Nkeji oge na maka ịkwụ ụgwọ tagzi naanị maka ha. Ọtụtụ ihe, ụdị nke tiketi Eurostar Business Premier Train na-enye ohere njem dị mma: ị nwere ike gbanwee ma kagbuo njem gị, tupu ọpụpụ gị ma ọ bụ ruo 60 ụbọchị mgbe ọpụpụ gị, niile na enweghị ego mmezi.
Enwere ndenye aha Eurostar?
Mba, na ntụle, A na-akwado Eurostar site na isi aka na ntinye aka ma ọ bụ na njem ọ bụla anaghị akwado ya, mana ọ bụrụ na ị na-eme njem ọtụtụ site na Eurostar ị nwere ike isonyere Eurostar Club, nke a bụ usoro iguzosi ike n'ihe nke na-enye gị ohere ịnakọta isi ụgbọ oloko ka ị nwee ike ịgbapụta ihe ndị a na tiketi ma ọ bụ ego. Earn na-akpata 1 rụtụ aka maka £ 1 ọ bụla i mefuru na ihe ndị a, ị ga-enye gị ihe ùgwù ụfọdụ:
– site 200 isi: Na-enweta tiketi Eurostar na ọnụego ọnụego.
– Ọ bụrụ na ị nweta 500 isi: ị nwere ike inweta 1 ụgbọ elu nkwalite ọrụ ụgbọ elu.
– Ma ọ bụrụ na ị jisiri ike iru 1,000 isi: ị nwere ike ịgbapụta 1,000 na-arụtụ aka na njem dị nso Eurostar na London si ebe ọ bụla na Western Europe.
Ogologo oge tupu ọpụpụ ga-abata?
Iji nweta Eurostar gị ma nọrọ n'oge gị, ụzọ ụgbọ oloko na-atụ aro ka ị rute opekata mpe 1 elekere tupu ụgbọ ala Eurostar gị pụọ. Anyị nọ na Save A ụgbọ okporo ígwè ebe ọ bụ na anyị gara ọtụtụ ebe na ụgbọ oloko Eurostar na nke a bụ oge zuru ezu ma ọ bụrụ na kwụ n'ahịrị na paspọtụ njikwa agaghị adị ogologo, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ụlọ ahịa ndị ahụ ma nweta ihe ndị ahụ ịchọrọ maka njem ụgbọ oloko ka ọ bụrụ nke ọma.
London na Marseilles train
London na ụgbọ oloko Moutiers
The Hague na London Ụgbọ oloko
London na Bourg Saint Maurice Trains
Kedu oge usoro ụgbọ oloko Eurostar?
Nke a bụ ajụjụ siri ike na nke Save A Train nwere ike ịza ozugbo, gaa na peeji nke anyị ma pịnye mbido na ebe ị na-aga, you nwere ike ịchọta ihe kachasị zie ezi Usoro nhazi oge ụgbọ oloko Eurostar enwere, Enwere ụgbọ oloko si 7 n'ụtụtụ ka 9 na mgbede n'okporo ụzọ ndị Eurostar na n'okporo ụzọ ndị ọrụ kachasị dị ka Paris gaa London ma ọ bụ London gaa Paris, ị nwere ụgbọ oloko Eurostar na-agba ọsọ kwa elekere ọkara elekere, have ga-ahọrọrịrị tiketi Eurostar kwesịrị ekwesị maka nhazi njem gị.
London na Antwerp train train
London na Rotterdam tiketi ụgbọ oloko
Disneyland Marne-la-Vallee na London ụgbọ elu tiketi
London na Lille ụgbọ oloko tiketi
Kedu ụlọ ọrụ Eurostar na-eje ozi?
A na-akpọ ọdụ ụgbọ oloko Paris maka Eurostar Paris Gare du Nord, ọdụ ụgbọ oloko dị na mpaghara iri nke Paris, nke bu +-30 nkeji na-aga site na Katidral Notre Dame. Iwere Eurostar, havebanye n’ọdụ ahụ wee gbagoo 1 ala n'ime Gare du Nord na-eji ndị mgbapụ nke dị n'etiti ọdụ ahụ.
Na Disneyland Paris, Eurostar rutere n'ọdụ ọdụ ahụ Marne La Vallee Chessy, nke di 5 nkeji na-esite na Disneyland Resort na Disneyland Hotels. Enwere ebe nchekwa ngwongwo dị n'aka ekpe ma ị nwere ike ịga n'ohere ntụrụndụ ahụ na-echegbughị onwe gị maka nnukwu ụgbọ ala gị.
Na London, Ugbu a ụgbọ oloko Eurostar na-apụ ma rute Panlọ Ọrụ Mba Ofesi St Pancras, emi odude ke edem edere London London. tupu 2007, Eurostar ụgbọ oloko rutere rute na Waterloo Station na London.
Nke Brussels Midi-Zuid (Brussels South) ọdụ dị n'etiti Brussels, mana gbaa mbọ ghọta na ịchọrọ Brussels Midi-Zuid ọ bụghịkwa Central Central Station, Trainlọ ọdụ ụgbọ oloko Brussels Midi-Zuid nwere 22 na-azụ usoro nyiwe, na ụlọ ọrụ tiketi Eurostar dị nso na ikpo okwu 8. Tiketi ụgbọ oloko Eurostar na-enye gị ohere ịga njem n'enweghị nsogbu n'etiti Brussels Midi Zuid na Brussels Central.
Amsterdam Centraal (Amsterdam Central ọdụ) di na Amsterdam city center n’akuku osimiri, mgbe ị na-ahapụ ọdụ ụgbọ oloko, ị na-ahụ Amsterdam Main Street jupụtara na ebe nkiri dịka Madame Tussauds ma ọ bụghị site n'ebe ahụ nwekwara mpaghara ọkụ ọkụ. Dị ka n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ oloko na Europe, Inwere ngwongwo ngwongwo na-emeghe ma na-emechi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga 1 otu ụbọchị ma ọ bụ tupu ị nwee ike ịbanye na nkwari akụ gị.
Na Lille, ị nwere 2 ụgbọ oloko adịghị anya na ibe ha, ma i ghaghi icheta Jehova Eurostar na Lille, bụ Lille Europe ma ọ bụghị Lille Flandres, ma ọ bụrụgodi na ị na - eme ka ọ dị mfe ịme mmehie, ụgbọ okporo ígwè dị 5 minita iche na ibe ha.
Antwerp Central Station bụ ebe ị banyere Eurostar na Antwerp nke abụọ kacha ukwuu na obodo Belgium, Ọ bụrụ na i si Antwerp gaa, anyị na-atụ aro ka ị bịa n'ọdụ ụgbọ oloko ogologo oge karịa ka akwadoro 1 oge tupu ọpụpụ n'ihi nke a lọ ọdụ ụgbọ oloko meriela onyinye maka ịchọ mma na ihe owuwu ulo ya 5 ala na ihe ya di nma ile anya n’ime ya.
Mgbe ị na-aga site na ma gaa Rotterdam, ị ga-eji Rotterdam Central Station ma ọ bụ n’aha mara ya Rotterdam Central, A na-arụ ụgbọ okporo ígwè a dịka obere nnukwu ụlọ ahịa site na mpụta, yabụ ị ga - enwe ọ enjoyụ ịzụ ahịa dị mma tupu ị ma Njem Eurostar.
Kedu ihe m ga-eweta na Eurostar?
Bringmalite onwe gị na njem Eurostar gị dị mkpa, mana n’elu ya ịkwesịrị ijide n’aka na ị ga-eji akwụkwọ njem Eurostar gị, Ihe ọzọ ị ga - enwerịrị bụ paspọtụ dabara adaba ma ọ bụ oge niile ọ dị mma ịnwe mkpuchi mkpuchi njem.
Kedu ụlọ ọrụ nwere Eurostar?
Companylọ ọrụ nwere Eurostar, akpọghị aha Eurostar International Limited, 55% nke SNCF nwere, 30% CDPQ Canada, 10% Hamis nke Federalted na nke fọdụrụ bụ nke ụzọ ụgbọ okporo Beljọm, SNCB.
Eurostar FAQ maka Olee ebe m ga-eso Eurostar?
Ewezuga Paris, London, Amsterdam na Brussels, Rotterdam, na Lille, Eurostar na-arụkwa ahịrị oge. N'oge ọkọchị, n'agbata July na Septemba, ụfọdụ ụgbọ oloko Eurostar na-aga Avignon na Marseilles ozugbo, Mgbe oge oyi, n’agbata ọnwa Disemba na Eprel, Insgbọ oloko Eurostar nwere ike ịga ozugbo na skai mpaghara Alps dịka Moutiers ma ọ bụ Bourg St Maurice bụ ndị bụ isi obodo ga-aga site na Ski ntụrụndụ dịka La Plange, Oshọrọ ndị ahụ, Tignes na Val Thorens.
Kedu usoro usoro ịbanye na Eurostar?
You rute n’ebe ọdụ ụgbọ oloko na mpaghara akpọpụtara, ị na-enyocha tiketi Eurostar gị, N'oge ndị mmadụ na-ahọrọ iji koodu QR, mana ịnwekwara ike ịnwe mpempe akwụkwọ ụgbọ oloko gị na gị wee nyocha nke ahụ, mgbe ahụ ị ga-aga nyocha nke nchekwa (nke dị ọsọ karịa na ọdụ ụgbọ elu), gaa na njikwa paspọtụ ma gafee ókè ahụ wee banye n'ụgbọ okporo ígwè gị na n'ụzọ i nwere ọtụtụ ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ezumike Eurostar, Na vidiyo na-esote ị ga-ahụ usoro ahụ dum site na mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ruo mgbe ị banyere ụgbọ ala Eurostar gị.
Kedu ọrụ na Eurostar?
Onwere ebe di na train Eurostar nke arara ka ihe onunu na nri di nfe na ugboala Eurostar, Nchịkọta nhọrọ gụnyere sandwiches, chọkọleti chọkọleti, snacks, chọkọleti chọkọleti, kọfị, choko di uto ma obu tii. Nwere ike iri ihe ma drinkụọ ihe ọ inụ inụ n'ụgbọ okporo ígwè a ụlọ oriri na ọ restaurantụ orụ ma ọ bụ were ihe ị zụtara laghachi n'oche gị. Nwere ike iji oghere ikike n’akụkụ oche gị na ụgbọ oloko Eurostar.
Kedu ka m ga-esi gaa London St. Pancras International ga-aga ụgbọ oloko Eurostar?
Dị ka ọ dị mkpa maka njem ọ bụla na London, iji London n'okpuruala ịbanye na St Pancras International Station bụ ụzọ kachasị mfe. Ozo isii dị n'okpuru ala na-erute Royal Cross Station ma site ebe ahụ ị ga-eji ụkwụ gaa St Pancras International na nkeji ole na ole. London St Pancras International dịkwa kwa nkeji ole na ole site na ọdụ ụgbọ oloko Euston ma ọ bụrụ na i si South nke London na-abịa.
Ọ ga-ekwe omume iji ụgbọ oloko Eurostar dị n'etiti London na Amsterdam?
Kemgbe Eprel 2018, ekele Eurostar, can nwere ike ịga n'etiti London na Amsterdam n'ihe dị ka 3-4 awa, ọ dịghịkwa mkpa ịgbanwe ụgbọ oloko na Brussels n'agbanyeghị ụfọdụ ụgbọ oloko Eurostar si London gaa Amsterdam, M kwụsịtụ na Brussels, mana nke ahụ dabere na tiketi Eurostar ị na-azụ.
Achọrọ Eurostar Ajụjụ Kasị Elu – Etosiri m itinye akwụkwọ na Eurostar tupu oge eruo?
Mgbe ịzụrụ tiketi ụgbọ oloko Eurostar, A ga-ekenye gị oche na-akpaghị aka mgbe ị na-edebe ndoputa gị. Ma ọ bụrụ na enwere oche efu mgbe ịnọ n'ụgbọ okporo ígwè, a na-ahapụ gị ka ịgagharị iji nwee ohere ọzọ.
Enwere ikuku ịntanetị n'ime Eurostar?
Can nwere ike ịnụ ụtọ Intanet ikuku WiFi na ụgbọ oloko Eurostar niile na klaasị njem niile mgbe ịzụrụ tiketi Eurostar tupu oge eruo.
Ọ bụrụ na ị ruru ebe a, knowmara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko Eurostar gị ma adịla njikere ịzụta tiketi ụgbọ ala Eurostar gị SaveATrain.com
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml ma inwere ike igbanwe / pl ka / nl ma obu / fr na otutu asusu.